Super Hide IP 3.3.4.8 (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် IP Hide ချင်သူများ) | IT Sharing Network
Super Hide IP 3.3.4.8 (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် IP Hide ချင်သူများ)
ရေးသားသူ Pyae Phyo (ပြည်)
မင်္ဂလာပါ.... Super Hide IP က မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ IP ကို တစ်ခြားနိုင်ငံက IP အဖြစ်ပြောင်းလည်းဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်... မြန်မာနိုင်ငံကသုံးနေပေမယ့် တခြားနိုင်ငံက IP ကိုပြောင်းလည်းဖော်ပြပေးပြီး Fake လုပ်နိုင်ပါတယ်... ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံကသုံးနေပေမယ့် France ကသုံးနေသလိုမျိုးပေါ့ ပြောင်းလည်းပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း တော်တော်များများ ထည့်ပေးထားတဲ့အပြင် မြေပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးပါတယ်... နောက်တစ်ခုက Your IP address has been banned from accessing our site ဆိုပြီး ကိုယ့် IP ကို site ဆိုက်တစ်ခုခုက banned ထား ပိတ်ထားလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ ဒီကောင်လေးသုံးပြီး အလွယ်တကူ ၀င်လို့ရပါတယ်... အောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ နမူနာပုံလေးတွေကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ... တစ်ခုသတိပြုရမှာက setting ထဲက Browser မှာ အသုံပြုမယ့် Browser ကို အမှန်ခြစ်ပေးထားဖို့ပါ... အသေးစိပ်သလိုလျှင် http://www.superhideip.com/products/super-hide-ip.html ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်..
Protect your privacy on the Internet. Use Super Hide IP to surf anonymously, prevent hackers from monitoring your online activities or identity thieves from stealing your identity and other personal information, send anonymous email, and un-ban yourself from forums or restricted websites.
With Super Hide IP, you are able to be assigned one of our fake IP addresses which can be from different countries such as United States, United Kingdom, France, etc. Super Hide IP works with Internet Explorer, Firefox, Opera, Maxthon, MyIE and is compatible with all types of routers, firewalls, home networks, wireless networks and any other kind of Internet.
Click Hide IP button and you will be assigned fake IP addresses, preventing others from getting your true IP when surfing the Internet.
Surf anonymously to prevent hackers or identity thieves from monitoring your web activity or intercepting your personal information such as your financial information.
You can select to use fake IP from different countries via "Choose IP Country" option and can Check IP directly.
Hide your IP in E-mail headers. Be protected while sending emails via Yahoo!, Hotmail, GMail.
Un-ban Yourself from Forums and Restricted Websites
Use Super Hide IP to change your IP which allows you to access any forums or websites that has ever banned you.
Super Hide IP 3.3.4.8
>>> ကြည့်ရန် <<<
Download ကို နှိပ်လိုက်လျှင် ပွင့်လာသောဆိုက်၏ ညာဘက်အပေါ်ဒေါင့်တွင်
Please wait5seconds ဆိုတာပေါ်လာပြီး အချိန်ပြည့်ပါက
SKIP AD ကိုရောက်သွားပါမည် SKIP AD ကို ထပ်ပ်လိုက်လျှင်
Download လင့်ကို ရောက်ပါမည်။
Internet Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Folder Lock 7.0.2 Full Version+Serial Key+Registrationn
Folder Lock 7.0.2 Full Version+Serial Key+Registration ဒီကောင်လေးက Folder Lock 7.0.6 တောင်ထွက်နေပါပြီ ... function လန်းလို့ ရှယ်လ...
USB drive ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ပက်ဝက်ချထားနိုင်မဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ မိမိစက်ထဲက ဒေတာတွေကို မိမိမသိပဲ usb ကနေ ယူလို့မရအောင်လည်းတားစည်းနိုင်ပါ...
Folder Lock 7.1.1 (8.9 Mb)
Folder တွေကို Lock လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... သူရဲ့ Feature တွေကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပြီး အသေးစိပ်...
Files တွေကို copy လုပ်မရအောင် ပိတ်ထားမယ် Newsoftwares Copy Protect v1.5.0 | 23.1 MB
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိရဲ့ Files တွေကို ဖွင့်ကြည့်ခွင့်ပေးမယ် copy လုပ်ခွင့်တော့မပေးပဲ ပိတ်ထားလို့ရပါတယ် ... မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Data တေ...
Kaspersky Daily Activation Keys 21.8.2013
ယနေ့ထွက် Kaspersky Keys အသစ်လေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကီးထည့်ပုံကိုလည်း အောက်မှာပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Kaspersky In...
Usb block 1.5.1 full version (4.0 MB)
ဒီကောင်လေးကတော့ မည်သည့် Device ကိုမဆို block လုပ်နိုင်ခြင်း မိမိ data တွေကို တခြားသူခိုးဝှက်ခြင်းမှ မခံရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း Copy...
Folder Protect 1.9.5
မင်္ဂလာပါ.. သူများ မသိစေချင်တဲ့ မိမိ Data တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Folder Protect 1.9.5 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://n...
Computer Dictionary (Myanmar to English - Engnish to Myanmar )
ကွန်ပြူတာ Dictionary အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန် - Whizzo Engnish to Myanmar Dictionary - Ayar Myanmar to...
IObit Malware Fighter 1.4 PRO (18.6MB)
ဒီကောင်လေးကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းထားလို့ update version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... ကျွန်တော်လည်း ဒါလေးပဲသုံးနေပါတယ် စက်လေးလန်စေတဲ့ Ma...
Wordpress Installation guide (ကိုယ်ပိုင်Blogတစ်ခု ...
မိမိ Domain အား Blogspot ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင...
Firefox က error တွေကို ရှင်းချင်ရင် ( Reset Firefo...
Kaspersky Internet Security 2014 For3Months Lice...
Kaspersky 2014 14.0.0.4651 Final (Internet Securit...
Kaspersky Reset Trial 2.1 Final (အသုံးပြုနည်း)
Internet Download Manager 6.17 Build 8 Final
Huawei တွေ Firmware ရှာရာမှာ ကူညီပေးမယ့် Huawei Fi...
Blog တွင် Cbox ထည့်သွင်းနည်း
Oh! My God (မြန်မာစာတန်းထိုး)
SUPERAntiSpyware Professional 5.6.1032
Super Hide IP 3.3.4.8 (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ...
Wise Care 365 Pro 2.73 Build 215
Blog မှာ Facebook Like Box ထည့်သွင်းနည်း
MP3/ MP4/ MP5 Hardware Trips
Windows 8 Loader v1.7.9 Windows 8 Activation For a...
WinToFlash 0.8.0000 Beta (WinToFlash ကိုသုံးပြီး U...